Fantaro ny fomba hikarakaranao ny fahasalamanao ara-tsaina isan'andro | Bezzia
Ahoana no hikarakaranao ny fahasalamanao ara-tsaina isan'andro
Susana Garcia | 02/05/2021 18:00 | Nohavaozina amin'ny 28/04/2021 09:49 | Psychology, Psychology sy mpivady
La ny fahasalamana ara-tsaina dia hevitra lehibe tokoa Tsy afaka rakotra zavatra iray fotsiny ianao fa saika ho fantatry ny rehetra rehefa salama tsara ianao ary rehefa tsy. Ny fikarakarana ny fahasalamantsika ara-tsaina dia zava-dehibe toy ny fikolokoloana ny fahasalamantsika ara-batana, satria izy roa dia mifamatotra akaiky, tsy afaka hanana iray ianao raha tsy misy ny iray hafa. Ka hahita toro-hevitra vitsivitsy isika hianarana ny fomba hikarakarana ny fahasalamana ara-tsaina isan'andro.
ny ny fahazarana sy ny fiainantsika isan'andro dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fomba fahitantsika ny tenantsika ara-tsaina. Ny fahasalamana ara-tsaina dia tsy maintsy karakaraina isan'andro mba hahatratrarana fifandanjana izay ahatsapantsika fa tsara. Izany no mahatonga ny zavatra maro izay afaka manampy antsika ho salama kokoa ary hanana saina matanjaka sy salama kokoa.
1 Sakafo ara-pahasalamana
2 Karakarao ny vatanao
3 Karakarao ny namanao
4 Fotoana fialan-tsasatra
5 Manaova zavatra tianao isan'andro
6 Fandaminana sy antony manosika
Ny fihinanana sakafo mahasalama dia iray amin'ireo lakilena lehibe tokony hananantsika saina salama. Na dia mety tsy toa izany aza dia misy fiantraikany betsaka amin'ny saintsika ny fahasalaman'ny vatana ary ny mifanohitra amin'izay no izy. Izany no antony tsy maintsy hikarakarantsika ny tenantsika anatiny sy ivelany. Tena ilaina izany misakafo tsara mba hahatsapana fahasalamana ary hikarakara ny vatana mandritra ny fotoana maharitra. Ny sakafo dia tsy maintsy voalanjalanja, miaraka amin'ny karazana otrikaina isan-karazany, mba hialana amin'ny tavy sy siramamy tototra izay mety hanimba ny fahasalamantsika. Raha misakafo tsara isika dia hanana fifandraisana ara-pahasalamana amin'ny sakafo ary hisoroka ny fahaverezan-danja loatra sy ny olana ara-pahasalamana mety hoentin'ny sakafo tsy dia tsara. Mihinana voankazo sy legioma isan'andro ary misotroa rano be dia be dia ho tsikaritrareo amin'ny fomba voajanahary ny fiadanam-po amin'ny vatanao.
Karakarao ny vatanao
Ny fikarakarana ny vatana dia ampahany lehibe hafa. Zava-dehibe ny sakafo, nefa koa manao fanatanjahan-tena mba ho mailaka, tanora sy salama. ny manatanjaka ny hozatra sy taolana ny fanatanjahan-tena, mampihena ny fizotran'ny fahanterana ary manampy ny fivezivezena. Tsy vitan'ny hoe manampy antsika ara-batana izy io, fa manampy amin'ny fampivoarana ny saina sy hahatsapa ho tsara kokoa koa, satria ny fanaovana fanatanjahan-tena dia manampy antsika hamoaka endorphins sy hormonina hafa izay manatsara ny rafitra iray manontolo, anisan'izany ny hery fiarovan'ny vatana.
Karakarao ny namanao
Ny fananana namana dia ampahany lehibe amin'ny fananana saina salama. Ny namana no fianakaviana nofidinao ary raha tsara izy ireo dia hanohana azy ireo foana isika. Saingy tsy tokony atao ambanin-javatra ny fisakaizana, fa tsy maintsy karakaraina koa izy ireo. Mijanona miaraka amin'izay manome zavatra ho anao sy ho an'ireo manan-danja aminao. Na olona fiaraha-monina ianao na tsia dia tena ilaina ny fananana finamanana tsara.
Amin'izao fotoana izao dia mifantoka betsaka amin'ny asa rehetra tokony hataontsika isika nefa tsy manisy fiheverana ny fotoana fialamboly. Matetika isika no manadino manana fotoana malalaka isan'andro ho an'ny tenantsika, miala sasatra na hanao izay tiantsika. Ka tokony ho masina izany. Isan'andro dia tsy maintsy miala sasatra izy satria raha tsy mitandrina ny tenantsika isika dia tsy afaka hikarakara olon-kafa na ho salama ara-tsaina.
Manaova zavatra tianao isan'andro
Tokony hanao zavatra tiantsika isan'andro isika. Ity dia ampahany tena ilaina satria ny fialamboly sy ny fialamboly dia mampihena ny haavon'ny adin-tsaina ary mahazo aina tsara kokoa isika. Raha mandalo ny fotoana ianao manao zavatra haingana dia io azo antoka fa tianao izany ary ankafizinao izany. Izany no antony tokony hanaovanao zavatra toy izao isan'andro.
Fandaminana sy antony manosika
Zava-dehibe ny fiainantsika voalamina ihany koa ary manana tanjona sy antony manosika isika. Mora kokoa ny mahatsapa ho mahazo aina sy mahatsapa fiadanam-po raha manana fiainana milamina isika, satria io fomba io dia afaka manatsara ny fotoanantsika koa isika. Etsy ankilany, ilaina ny fananana antony manosika, satria manampy antsika hifoha isan'andro sy hanana tanjaka hahatratrarana ny tanjontsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Ahoana no hikarakaranao ny fahasalamanao ara-tsaina isan'andro
Taovolo ho an'ny volo tsara
Zucchini matsiro sy tart fromazy osy